Umaka: ukulandelwa kokuqukethwe | Martech Zone
Umaka: ukulandelwa kokuqukethwe
NgoLwesibili, ngoJulayi 26, i-2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba sakha amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, sihlala sisebenza kuma-mediums nezinhlaka zezinhloso. Siphusha okuqukethwe okuningi okubanzi okungena kuma-infographics anemininingwane angena emaphepheni amhlophe noma ezifundweni zamacala. Kwisivakashi esicwaninga ukuthenga kwaso okulandelayo, bayakwazisa ukugxila kusuka kokukhulu kuya kokuncane ngaphandle kokuchitha isikhathi sabo. Kuthiwani uma lolo hambo lokuqukethwe lungakhuliswa, lwenziwe ngezifiso ngokuya ngemininingwane yezivakashi, futhi luqhutshwe ngemikhankaso efanelekile e-
I-Spundge yenza kube lula ukulandela imininingwane engcono kakhulu, ulwazi lwe-distill, ukwakha imibono ephoqelelayo, nokwakha okuqukethwe okunethonya. Banakho kokubili inguqulo yamahhala nenguqulo yobungcweti yesikhulumi sabo. I-Spundge PRO iyipulatifomu yokuqukethwe enika amandla amaqembu nabantu ukuthola, ukuhlanganisa, ukudala nokusabalalisa okuqukethwe okubandakanya, okunethonya. ISpundge ikuvumela ukuthi: Landelela - Gcina umbhalo walokho okuqukethwe okungcono kakhulu, okuhlelwe kahle kwaba Izincwadi Zamabhuku ngezihloko, imicimbi, abantu noma yisiphi isakhiwo